ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီမည့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းလူငယ်များ? - Yangon Media Group
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီမည့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းလူငယ်များ?
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဆောင်ရွက်မည့် UEHRD ကော်မတီအား ကူညီပေးမည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်အားပေးလူငယ် ၈၃ ဦးသည် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ကျော်မိုးဦးဆောင်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှတစ်ဆင့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့နယ်များသို့ ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ဒုတိယအဖွဲ့ ဆက်တိုက်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်။
ပထမအကြိမ်သွားရောက်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူငယ်များသည် ကျေးရွာများအထိ ကွင်းဆင်းပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ကာ ပထမအခေါက် လူငယ်ရက် ၂ဝ ခရီးစဉ်ဟု ခေါ်ပါသည်။ အဆိုပါ လူငယ်ရက် ၂ဝ ခရီးစဉ်အတွက် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် မကွေးမြို့မှ ဦးစိုးဝင်းသန့်နှင့်ဇနီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းသန်းနွယ်မိသားစုတို့မှ တစ်ဦးလျှင် ကျပ်ဆယ်သိန်းဖိုးစီ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှု အာမခံပရီမီယံကို Global World Insurance ကုမ္ပဏီတွင်ထားရှိပေးထားကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် အသက်အာမခံထားရှိပေးသဖြင့် ခရီးသွားရသော လူငယ်များရော၊ ၎င်းတို့၏ မိဘဆွေမျိုးများကပါ စိတ်ချမ်းသာပြီး ရှားပါးသော မွန်မြတ်သည့် အလှူဖြစ်ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာစန်းစန်းအေးက ပြောသည်။ ရခိုင်ဒေသသို့သွားရောက်၍ လုပ်အားပေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အသက်အာမခံပြု လုပ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဒေါက်တာအောင်သူရိန် (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)ကယ် ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာန ဖုန်း-ဝ၉၅၃၃ဝ၅၂ဝ နှင့် ဒေါ်အေးမိုးမိုးကြည် ဂလိုဘယ်ဝေါလ် အာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖုန်းနံပါတ် ဝ၉ ၂၅၁ဝ၁၆၉ဝဝ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။